Dhaqdhaqaaqa xaddidan, Malta
Baska Guryaha Malta
Kalsooni ku saarida Wadooyinka
Waxaan kufaraxsanahay in aan ka shaqeyno mid ka mid ah macalimiinta casriga ah ee ugu da'da yar iyo tan ugu caansan ee Hire, Mini Bus iyo Chauffeur Driving Car Fleet.
Magaca Premier ee Gaadiidka Malta
Magaceennu waxaa loo dhisayey ballanqaad heer sare ah, adeeg tayo leh, iyo mowqifka macaamiisha.
70 Sano Lacagta Tababaraha
Tan iyo 1944, waxaa naloo siiyay macaamiisha u baahan adeegyada gaadiidka ee Malta.
KU SOO DHAWEYN KARO PARAMOUNT COACHES
Tababarayaasha Paramount waa shirkad isgaarsiineed oo ku taala Malta oo bixisa Coach Hire, Mini Bus, iyo Adeega Qalabka Drauffeur Driving Carta tan iyo 1944. Ballan-qaadkayagu waa habdhaqan xirfad leh oo diiradda saaraya baahida macaamilka si loo hubiyo xalal la isku halleyn karo.
Waxaan kufaraxsanahay in aan ka shaqeyno mid ka mid ah Malta ee ugu weyn oo ugu filnaanta casriga ah si ay u bixiso adeeg heer sare ah oo adeega Iskuulada, Jaamacadaha, Safaaradaha, Gawaarida, DMCs, Dalxiisayaasha Dalxiiska, Xukuumadda iyo Maamulka Deegaanka.
Macaamiishayadu waxay noo doortaan inay nala doortaan nabadda maskaxda ee aan ku siino. Waxan ku guuleysan karnaa aqoonkeena wacan ee gaadiidka ee Malta iyo awooddeenna inaga wax ka qabano dhacdooyinka laga yaabo inay soo baxaan.
Iyadoo loo marayo shabakadeena maxalliga ah, waxaan awoodnaa inaanu bixinno adeegyo gaadiid ah oo la isku halleyn karo oo ku yaalla Malta munaasabadaha shirkadaha, rakaabka gawaadhida ee safarka, gawaarida diyaaradaha iyo gaadiidka dugsiga / kuleejka.
GAADIIDKA ISKUULKA & KOOXDA
Waxaan nahay shirkadda gaadiidka dugsiga ee ugu weyn ee Malta oo bixisa gaadiidka ardayda dugsiyada dadweynaha, gaarka ah, luqadaha shisheeye iyo kaniisadaha.
Waxaan bixinnaa badeecado badan oo Malta ah iyo Gozo oo abuuraya waayo-aragnimo aan caadi aheyn oo ah khayraadka dabiiciga ah iyo taariikhda jasiiradaha.
KALA DUWAN MALTA
Bixinta Tababaraha waqtiyeynta iyo mihnada ah ee u dhaxeeya Madaarka Caalamiga ah ee Malta iyo hudheelka / hareeraha Malta iyo Gozo.
XADGUDUB KU QAADASHO LAMBAR
Bixinta kala iibsiga maraakiibta safarrada oo tilmaamaya bedelaad ka yimid hudheelada iyo meelaha ku xeeran jasiiradaha Malta.
SHIRKADDA & DHACDOOYINKA KALE
Bixinta gaadiidka wufuudda, wareejinta garoonka diyaaradaha, iyo baahida dib u eegista adeegga sahayda oo wanaagsan, jawaab degdeg ah, iyo kalsooni buuxda.
ADEEGYADA GAADIIDKA GAADIID AH & XIRFAD LEH
Haddii aad rabto inaad tagto ama aad weydiisato, waxaad xor u tahay inaad la xiriirto shaqaalaheena xirfadlayda iyo saaxiibtinimada. Waxay kaa caawin doonaan inaad ka jawaabto wixii su'aalo ah oo aad qabi kartid iyo in aad la kulantid shuruudahaaga gaadiidka.
Tababarayaasha isboortiga ayaa siinayay adeegyo gaadiidka ah oo u adeega xiriirka Malta Football Association tan iyo 2002.
Kooxahan soo socda ee caalamiga ah iyo kuwa caalamiga ah ee la aqoonsan yahay ayaa si dhammaystiran loogu adeegay Tababarayaasha Paramount:
CIYAARO, BULGARIA, KYPRUS, DENMARK, FINLAND, GEORGIA, GREECE, INTER, ISRAEL, LATVIA, LUXENBOURG, MACEDONIA, MANCHESTER UNITED, NORWAY IRELAND, NORWAY, PORTUGAL, SWEDEN,
"EF Lacageedka wuxuu adeegsanayay Garagearka Paramount inta badan baahidiisa gaadiidka ee sanadka 15. Codsigeena waxaa had iyo jeer la kulmay xirfad-yaqaanno badan iyo adeegyo oo had iyo jeer la isku halleyn karo oo lagu aamini karo. Tayada tababarayaasha iyo dabeecadaha darawalada ayaa sidoo kale ka tarjumaya tan. "
DUGSIGA LUQADDA EF
Diyaaradihii dhawaan la qaaday waxaa ka mid ahaa 300 Maraykanka iyo muwaadiniin kale oo ka socda Tripoli, Liibiya oo naga xigto, waxaan rabay inaan qaato daqiiqad iyo shakhsi ahaan inaan u mahadnaqo mahadnaqaaga iyo Tababarayaasha Paramount Ltd Taageeradaada deeqsi ah inta lagu guda jiro daadguraynta iyo dadaalka dambe caawiyaan daad-gureynta.
Diyaarintaada si aad iskugu xirto shaqaalaha Safaaradda ee geedi socodka daad-gureynta waxay muhiim u tahay sida si habboon oo wax-ku-ool ah u daad-gureyntu ay awood u leeyihiin in ay degaan oo ay helaan gargaar lagama maarmaan ah. Gaar ahaan, dabacsanaantaada iyo fahamkaaga sida jadwalka socdaalka ee safarka oo la socdo cimilada ayaa si dhab ah loo mahadnaqay. Ma awoodi karno inaan si wax ku ool ah u caawinno daad-gureynta iyada oo aan la helin taageerada iyo ka-go'naanta Tacliinta Paramount Ltd. "
Mr. Douglas W. Kmiec - Danjiraha Maraykanka
"Goobaha Garabyada ee Mosta, hadda waxay u adeegi jireen waaxyo kala duwan oo jaamacadeed oo leh adeegyo gaadiidka ku haboon, sanadaha ugu dambeeyay 35.
Inta lagu jiro waqtigan, waxaanu helnay shirkadan gaadiidka la isku hallayn karo oo macmiil ah oo badan. Haddi tababare, caruur yar yar, gaari wadida gaari loo yaqaan 'punctuality and delivery delivery' ayaa ah kii ugu fiicnaa ee laga heli karo jasiiradaha.
Ka sokow qiimaha aadka ujecel, tartamayaasha sharafta leh iyo waqtiyada u degsan waxaan ku helnay qiimaha ugu weyn ee naga caawiya inaan tartan kula tartamo adigoo xiraya dalabyada ugu wanaagsan ee ardayda ajnabiga ah iyo martida tacliinta. "
Jaamacadda Malta University Holding Ltd.
Shirkadda MALTA UNIVERSITY SHIRKADDA
WAA MAXAY WAXBARASHO GAAR AH
Sannadeena 70 ee ka go'nayd heer sare ah ayaa naga siisay waayo-aragnimo ballaaran oo ka jirta qaybta gaadiidka ee Malta, taas oo noo ogolaanaysa inaan siino macaamiisha iyo adeegga xirfad leh.
70 Sannad Xeeladeed
Maalin kasta waa maalin cusub oo nagu filan oo aan ka shaqeyno si adag inaan u qancino macaamiisheena meel walba.
Malta - Yurub.
Furan 24 / 7
Siyaasadeena Caafimaadka & Amniga
Copyright © 2017 - Loo dhisay Eyelead + Eyetech . All rights reserved